Juventus oo Sii Kordhisay Dhibcaha ay Ku Hogaamineyso Horyaalka Talyaaniga “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Juventus ayaa toban dhibcood ka dhigtay dhibcaha ay ka sareyso kooxda Roma oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka talyaaniga,ka dib madkii ay caawo garoonkeeda Juventus Stadium 3-1 ug badisay kooxda AC Milan.
Kooxda Juventus ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 14-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Carlos Tevez.
Ciyaaryahan Luca Antonelli oo caawo kulankiisii u horeeyay u saftay kooxda AC Milan ayaa daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta gool bareejo ah u dhaliyay kooxda AC Milan.
Kooxda Juventus ayaa mar kale hogaanka ciyaarta qabatay,waxaana daqiiqadii 31-aad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay ciyaaryahan Leonardo Bonucci,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Alvaro Morata ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Juventus.
Kooxda Juventus ayaa horyaalka talyaaniga ku hogaamineyso 53-dhibcood,halka kooxda AC Milan ay horyaalka uga jirto kaalinta sagaalaad,iyadoo leh 29-dhibcood.
Kooxda Roma oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka talyaaniga ayaa beri galab la ciyaari doonto kooxda Cagliari.
Xulka DR Congo oo Ku Soo Baxay Kaalinta Sedaxaad ee koobka Qaramada Afrika